တရုတ်သွင်းကုန်ပြပွဲမှတစ်ဆင့် ဈေးကွက်အခွင့်အလမ်းများအား ကာဇက် စားသောက်ကုန်ထုတ်လုပ်သူများ စိတ်ဝင်စား - Xinhua News Agency
NUR-SULTAN ၊ နိုဝင်ဘာ ၃ ရက် (ဆင်ဟွာ)
ယခင်နှစ်များက တရုတ် နိုင်ငံတကာသွင်းကုန်ပြပွဲ (CIIE) သို့ တက်ရောက်ခဲ့သည့် ကာဇက်စတန်နိုင်ငံမှ စားသောက်ကုန်ထုတ်လုပ်သူများသည် မကြာမီကျင်းပမည့် ပြပွဲက တရုတ်ဈေးကွက်တိုးချဲ့ခြင်းမှ အခွင့်အလမ်းသစ်များ ဆောင်ကြဉ်းပေးနိုင်လိမ့်မည်ဟု ပြင်းပြင်းပြပြမျှော်လင့်လျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။ကာဇက် အအေးနှင့် အဖျော်ယမကာထုတ်လုပ်သူ Global Beverages သည် ပြပွဲအား ဒုတိယအကြိမ်မြောက် ပါဝင်ပြသမည်ဖြစ်သည်။
ယင်းကုမ္ပဏီ၏ ပို့ကုန်မန်နေဂျာ Dmitry Zhukov က ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ပေါင်းစပ်ထားသော ဘိလပ်ရည်အမျိုးအစားကို စတုတ္ထအကြိမ်မြောက် CIIE ပြပွဲတွင် တင်ဆက်ပြသမည်ဖြစ်ပြီး တရုတ်နိုင်ငံမှ စားသုံးသူများအနေဖြင့် ကာဇက် ဗော့ကာ (vodka) ၊ ကော့ညက် (cognac) ၊ ဝီစကီနှင့် ဂျင် (gin) အရသာကို မြည်းစမ်းခွင့်ရရှိမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
“တရုတ်ဈေးကွက်အတွက် အထူးသတ်မှတ်ထားတဲ့ထုပ်ပိုးမှုတွေ ကျွန်တော်တို့ ပြုလုပ်ထားပါတယ်။ ဒီပြပွဲက ပြပွဲသဘောမျိုးသာမဟုတ်ဘဲ သဘောတူစာချုပ်များ အဆုံးသတ်ခြင်းနှင့် တရုတ်ဈေးကွက်အတွင်း ဝင်ရောက်ခြင်း အဆင်ပြေချောမွေ့နိုင်ရန် မျှော်လင့်ပါတယ်။ ဒီပြပွဲက တိုးတက်မှုအတွက် ကြီးကြီးမားမား မြှင့်တင်ပေးပါလိမ့်မယ်” ဟု Dmitry Zhukov က ဆင်ဟွာသို့ ပြောကြားခဲ့သည်။
တရုတ်နိုင်ငံသို့ အမဲသား အဓိကတင်ပို့သူဖြစ်သော နွားကောင်ရေ သုံးထောင်မွေးမြူထားသော ကာဇက် အသားထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းနှင့် ဝန်ဆောင်မှုကုမ္ပဏီလည်း မကြာမီ ကျင်းပမည့်ပြပွဲသို့ အွန်လိုင်းမှ တက်ရောက်မည်ဖြစ်သည်။
“ကျွန်တော်တို့ ကုမ္ပဏီက ၂၀၁၉ ခုနှစ်ကတည်းက CIIE မှာ ပါဝင်တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီပြပွဲမှာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်း ၅၀ တန်ဖိုးရှိတဲ့ သဘောတူစာချုပ်တစ်ခု လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပြီး ခြောက်လအတွင်း အသား တန်ချိန် ၂,၅၀၀ ခန့် တင်ပို့နိုင်ခဲ့ပါတယ်” ဟု ကုမ္ပဏီတည်ထောင်သူ Bakhytzhan Abdrasilov က ပြောခဲ့သည်။
အသားထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်း လေးခုအနက် တစ်ခုမှာ တရုတ်နိုင်ငံသို့ တင်ပို့ခွင့်ရရှိထားခဲ့သော ၎င်းတို့ကုမ္ပဏီအနေဖြင့် တရုတ် စီးပွားရေးမိတ်ဖက်များနှင့် သဘောတူစာချုပ်သစ်များ လက်မှတ်ရေးထိုးနိုင်ရန် မျှော်လင့်ကြောင်း Abdrasilov က ပြောကြားခဲ့သည်။
ကာဇက်စတန်နိုင်ငံရှိ ရာစုနှစ်သက်တမ်းရှိသော ဆားထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း Araltuz သည်လည်း စတုတ္ထအကြိမ်မြောက် CIIE သို့ တက်ရောက်မည်ဖြစ်သည်။ “ဒါဟာ တရုတ်ဈေးကွက်ကို ဝင်ရောက်ဖို့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ စိတ်ဝင်စားမှုကို ထပ်လောင်းအတည်ပြုလိုက်ခြင်းလည်း ဖြစ်ပါတယ်” ဟု အရောင်းဒါရိုက်တာ Evgeny Korol က ဆင်ဟွာသို့ ပြောခဲ့သည်။
ကုမ္ပဏီအနေဖြင့် ပြပွဲအား အွန်လိုင်းမှ ပါဝင်ပြသမည်ဖြစ်သော်လည်း နမူနာပစ္စည်းများကိုမူ ရှန်ဟိုင်းသို့ ပို့ဆောင်ထားပြီးဖြစ်ကြောင်း Korol က ဆိုသည်။
“ဆားထုပ်ပိုးမှုက တရုတ်သွင်ပြင်လက္ခဏာဖြည့်စွက်ပြီး တရုတ်နိုင်ငံဈေးကွက်နဲ့ လိုက်ဖက်အောင် လုပ်ဆောင်ထားပါတယ်” ဟု ၎င်းက ပြောသည်။
“ပထမဆုံး CIIE ပြပွဲကို ကျွန်တော် တစ်ကိုယ်ရေသီးသန့်တက်ရောက်ခဲ့တယ်။ ပြပွဲက တကယ်ကို ခမ်းနားပြီး ကမ္ဘာတစ်ဝန်းက စက်မှုလုပ်ငန်းတွေနဲ့ ထုတ်ကုန်အမျိုးအစားအားလုံးနီးပါးကို လွှမ်းခြုံမှုရှိတယ်” ဟု ၂၀၁၈ ခုနှစ်က ပြပွဲသို့ ပထမဆုံး တက်ရောက်ခဲ့ခြင်းကို ပြန်ပြောင်းအောက်မေ့လျက် Korol က ပြောကြားခဲ့သည်။
“ကျွန်တော်တို့ ဒီနှစ်ထဲမှာ ဆားတွေကို ကုန်တွဲနှစ်တွဲနဲ့ တရုတ်နိုင်ငံကို တင်ပို့ခဲ့တယ်။ တရုတ်နိုင်ငံက ဖြန့်ဖြူးသူတွေအနေနဲ့ ဒီထုတ်ကုန်တွေကို လေ့လာနိုင်ခဲ့ပါတယ်” ဟု ၎င်းက ဖြည့်စွက်ပြောခဲ့သည်။
ကာဇက် စီးပွားရေးလုပ်ငန်း စုစုပေါင်း ၂၇ ခုက တရုတ်နိုင်ငံ ရှန်ဟိုင်းမြို့တွင် နိုဝင်ဘာ ၅ ရက်မှ ၁၀ ရက်အထိ ကျင်းပမည့် စတုတ္ထအကြိမ်မြောက် CIIE ပြပွဲသို့ တက်ရောက်မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ (Xinhua)
NUR-SULTAN, Nov.3(Xinhua) — Kazakhstan’s food producers who have attended the China International Import Expo (CIIE) in previous years keenly hope that the upcoming edition will bring them new opportunities from the ever-expanding Chinese market.
Dmitry Zhukov, the company’s export manager, said thatakind of mineral water withalightweight composition will be presented at the 4th CIIE and Chinese consumers will also have an opportunity to taste the Kazakh vodka, cognac, whiskey and gin.
“We have specially designed packagings for the Chinese market. We really hope that the expo will not be justashow, but facilitate the conclusion of contracts and entry into the Chinese market. This will give usabig boost to growth,” Dmitry Zhukov told Xinhua.
“Our company has participated in the CIIE since 2019. At the CIIE of that year, we signedacontract of 50 million U.S. dollars and exported about 2,500 tons of meat in six months,” said Bakhytzhan Abdrasilov, founder of the company.
Araltuz,acentury-old salt production company in Kazakhstan, will attend the CIIE for the fourth time. “This reaffirms our interest in entering the Chinese market,” Sales Director Evgeny Korol told Xinhua.
“The package of salt is adapted to the Chinese market by adding Chinese characters,” he said.
“I attended the first CIIE personally. The exhibition was really grand and covered almost all industries and types of products worldwide,” Korol said, recalling his first participation in the event in 2018.
“We shippedasmall batch of salt to China in two wagons this year, so that Chinese distributors can get acquainted with the products,” he added.
A total of 27 Kazakh enterprises will attend the 4th CIIE, which will be held in China’s Shanghai on Nov. 5-10. Enditem
Aerial photo taken on Nov. 3, 2020 showsaview of the National Exhibition and Convention Center (Shanghai), the main venue of the 3rd China International Import Expo (CIIE), in east China’s Shanghai. (Photo by Wu Kai/Xinhua)